﻿ पेङ्ग्विन मान्छे जत्रो थियो ?
पेङ्ग्विन मान्छे जत्रो थियो ?
बीबीसी । न्युजिल्यान्डमा भेटिएको मान्छे जत्रै ठूलो पेङ्ग्वीन चराको प्राचीन अवशेषले अहिले विश्वभरका वैज्ञानिकहरुलाई चकित पारिरहेको छ । यसरी गत वर्ष फेला पारिएको सो अवशेष पाँचदेखि ६ करोड भन्दा अधिक वर्ष अगाडि पेलेओसिन एपोकमा बस्ने ५ फिट ३ इन्च अग्लो र करिब ८० किलो तौल बराबरको पेङ्ग्वीन रहेको पत्ता लागेको हो ।
सो जीवलाई अहिले केन्टरबरी म्युजियमले ‘मन्स्टर पेङ्ग्वीन’ को नाम दिएको छ जसलाई न्युजिल्यान्डका लोप भएका बोटबिरुवा, सुगा, चील, चमेरासँगको सूचीमा समावेश गरिएको हो । विज्ञहरुका अनुसार डाइनोसोरहरु हराएको समयमा समुद्रका ठुल्ठुला जीव पनि लोप भएका थिए र त्यहीबेला पेङ्ग्वीनको रुप पनि ठूलो भएको अनुमान रहेको छ । केन्टरबरी संग्राहलयका वरिष्ठ अधिकारी पल स्कोफिल्डका अनुसार त्यसैपछिको तीन करोड वर्ष अत्याधिक ठूला पेङ्ग्वीनको युग थियो ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रजातिको ‘इम्पेरर पेङ्ग्वीन’ १.२ मिटर सम्म अग्लो हुन्छ । स्कोफिल्डले भने, ‘हाम्रो विचारमा त्यही समयमा अधिकांश जीवनहरुको स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । त्यसबेला न्युजिल्यान्डको पानीको तापक्रम २५ डिग्रीसम्म हुन्थ्यो जुन अहिले चाहिँ ८ डिग्रीमा झरेको छ ।’ यसरी ठूलो प्रजातिको पेङ्ग्वीन हुने समयमा न्युजिल्यान्ड अष्ट्रेलियासँग टाँसिएको थियो जुन थप अन्र्टाटिकासँग पनि जोडिएको बताइन्छ ।
यसरी दक्षिणी भूभागबाट ठुल्ठुला पेङ्ग्वीन किन गायब भए भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । यसमा वैज्ञानिकहरुले स्तनधारी प्राणीसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण हुन सक्ने अुनमान लगाएका छन् । गत वर्ष फेला पारिएको नयाँ प्रजातिको ठूलो हड्डी एक वर्षको अनुसन्धानपछि मात्र पेङ्ग्वीनको भएको पत्ता लागेको हो ।